Taariikh Xumadii Sheekh Deeq Oo Uu Nooga Warbixiyay Mudane Badawi - Cakaara News
Taariikh Xumadii Sheekh Deeq Oo Uu Nooga Warbixiyay Mudane Badawi
Qabridahar(Cakaaranews) Sabti, 23ka July 2016. In maydka sheekh deeq lawadho banaanada mudo 7 bari ah waa arin diini ah oo banaan maadaama uu ahaa qaadicu dariiq, dil, dhac, kufsi iyo boob uusan ukala aaba-yeelin oo aan tiro lagu soo koobi karin uu kagaysatay guud ahaan deegaanka balse iyadoo la eegayo bini’aadamnimada ayaa saacado gaaban gudahood lagu aasay maydkiisii.
In kastoo aan lakoobi karin falalka uu gaystay, Waxaa markhaati madoonto ah inuu Sheekh deeq kucaan baxay daadinta iyo kaganacsiga dhiiga shacabka oo uusan geed ugu soo gaban jirin. Waxaana taa cadayn u ah in isagoo udhashay degmada garbo uu hal maalin ah 4 oday oo qoyskiisa xigtada ah oo ay kamid ahaayeen: Maxamed Mukhtaar, Caligaab, Yuusuf Qabaase iyo Maxamed Cabdixaaashi uu gacantiisa kudilay.
Wuxuu sanadkii 2010ka qabalaha Cayuun intuu iskuxidhay 8 oday oo uu kamid ahaa: Cabdisagal hadhkoo cad uu nolosha kugubay. Waxaa taa kadarayd, 80kii qof ee Cobole ee iyagoo jiifa uu habeen badhkii kufuray baaska islamarkaana uusan hal ruux kabixin. Waxaaban afka lasoo marin karin ugaasyadii iyo suldaamadii uu kudal-dalay danood.
Sidoo kale, waxaan marnaba la iloobi karin ambalaastii dhagaxmadaw ee ay hooyooyinka uurka leh saaraayeen ee uusan mid kareebin, gabadhii uurka sideeda bilood ah lahayd ee degmada sagag uu kutoogtay ee la odhan jiray Cibaado Maxamed Axmed iyadoo ay dhaqankeena ceeb katahay dilka dumarku.
Qabaleeyada Bashuuro, dudumo-cad, Gafuuro-xun ee katirsan degmada Fiiqna wuxuu kulaayay waalidiin ay kamid ahaayeen: Dhagacade Maxamed Cumar, Ibraahin Xukun, Khaalid Nuur, Khaliil Sheekh Maxamed, Cabdimahdi Cabdulaahi, Saxane dhagoole iyo Xasan Sheekh Qaasin iyo kuwo kale meesha shariifkii xamaro, engineerkii buundada daakhato, engineerkii hufferdamkii xamarana uu si ulakac ah ugu dilay degmada xamaro. Waxaanan marnaba tiro lagu koobi karin agoonta uu waalidkood kudilay xasuuqyadii degmooyinka Dhoobawayn, Garbo, Gunagada, Lahelaw iyo Wardheer intaba.
Hadaba, waraysi aan layeelanay madaxa arimaha xisbiga gobolka qoraxey mudane Axmed Yaasiin oo kumagac-dheer Badawi oo reaction kabixiyay maydka sheekh deeq ayaa kawarbixiyay xasuuqyadii uu sheekh deeq kagaystay deegaanka gaar ahaan gobolka nogob. Mudane Badawi ayaana ahaa shaqsi had iyo jeer kasoo horjeeday talaabooyinka foosha xun ee ururkii la odhan jiray UBBO islamarkaana kujiray liiska shaqsiyaadka dilka ugu xukunaa.
Si kastaba ha ahaatee, mudane Axmed Yaasiin(Badawi) iyo marwo Sucaad Khadar Buurane ayaa qabtay shaqo fiican. Waxaana shaqa adaygooda daliil u ah inay UBBOda isticmaasha baraha bulshada oo dhan ay kacabaadiyeen islamarkaana ay tusaale uyihiin nidaamka dib u curashada. Waana xubno xisbi oo leh aragti shacab, karti, ficil, wadaniyad iyo kago’naansho horumarka iyo nabadgelyada deegaanka ah.
Iskusoo wada duuboo, UBBO af iyo adin toona waxba kumayeeli karto mas’uuliyiinta ficilka kamuujisay maydka sheekh.